निशान न्युज आश्विन २७, 2076
काठमाडौँ । भनिरहनु नपर्ला, राजधानीको यौनबजारमा अब नेपाली युवती मात्रै छैनन्, विदेशी पनि उत्तिकै छन् । रसियन युवतीहरुले त अपार्टमेन्टमा महँगो भाडा तिरेर यौनधन्दा नै चलाइरहेका छन् । विदेशबाट यहाँ आएर कसरी चलाइरहेका छन् त उनीहरुले धन्दा ? अनिल यादवले रसियन युवतीको यौन अखडामै पुगेर तयार पारेको रिपोर्ट ।
एनसेलको मोबाइल नम्बर बोकेकी ती युवतीको फोनमा डायल गरे । ‘हेलो ?’ ‘यस’ ‘के छ खबर ?’ ‘फाइन । केही काम थियो कि ?’ ‘तपाईंसँग भेट्न मन लागेको थियो ?’ ‘त्यसो भए पैसा लिएर आऊ । म कोठामै छु ।’
संवाद टुंगिन नपाउँदै उनले फोन काटिन् । संवाददातालाई ती युवती बस्ने अपार्टमेन्ट र कोठाबारे केही पनि जानकारी थिएन । मात्र मोबाइल नम्बर प्राप्त थियो । फेरि मोबाइलमा म्यासेज पठाएँ, ‘लोकेसन त बिर्सिएँ, कहाँ पो थियो ?’ रिप्लाई आयो– ‘ अपार्टमेन्ट (काठमाडौंको चर्चित अपार्टमेन्टको नाम थियो) ।
कोठा नम्बर ३०२ । ती युवतीले पैसा लिएर मात्र आउनू भनेकी थिइन् तर कति त्यसबारे छलफल भएको थिएन । फेरि फोन डायल गरेँ । ‘हेलो ?’ ‘यस, के भयो ? ’ ‘पैसा कति लाग्छ, म आउँदैछु ।’ ‘वान टाइम, टेन थाउजेन (एकपल्टको १० हजार रुपैयाँ)।’ ‘ओके ।’
सोमबार साँझको ६ बजे । एक सहकर्मीसहित संवाददाता दिइएको लोकेसनमा पुग्यो । ती युवतीले जहाँ बोलाइन्, त्यहाँ को–को बस्छन् ? कसको संरक्षणमा अपार्टमेन्टमै धन्दा चल्ने गरेको छ ? त्यसबारे केही जानकारी थिएन ।
तीन महिनाअघि विदेशी यौनकर्मीबारे रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा डिएसपी रौठौरले भनेका थिए, ‘धेरैजसो रसियन युवतीको टार्गेट क्यासिनो हुन्छ रे उनीहरू त्यताबाट ग्राहक लिएर आफ्नै फ्ल्याट र अपार्टमेन्ट लान्छन् ।’
संवाददाता स्वयं अपार्टमेन्टमा पुगेर ‘रसियन कलगर्ल’लाई भेटेपछि उनको सूचना मेल खायो । आफ्नो खास नाम रोज बताउने इन्दिराले भनिन्, ‘हामी प्रायः ग्राहक क्यासिनोबाट ल्याउँछौँ । कोही कोठामा आउँछन्, कोही उतै कोठा म्यानेज गर्छन् । हाम्रा प्रायः ग्राहक विदेशी नै हुन्छन्, नेपाली एकदमै कम हुन्छन् ।’
यति धेरै चकलेटहरु छरिएको देखेपछि संवाददाताले डिनारासँग जिज्ञासा राख्यो, ‘यसरी किन चकलेट जथाभावी फ्याँकेको ?’ उनले जवाफ दिइन्, ‘फ्याँकेको होइन, यो त गुडलक हो । चप्पलमा चकलेट राखेपछि गुडलक हुन्छ । तिमीहरुजस्तो ग्राहक धेरै आऊन् भनेर राखेको नि ’
यौनकर्मीको रुपमा सक्रिय विदेशी युवतीहरू कसरी नेपाल आइपुग्छन् ? कोही पर्यटन भिसामा नेपाल आउने र विभिन्न बहानामा भिसा बढाएर बस्ने गरेको र कोही वर्किङ भिसामा आउने गरेको खुल्यो ।